Kyrgyzstan: Vanintaonan’ny Fanambadiana · Global Voices teny Malagasy
Kyrgyzstan: Vanintaonan'ny Fanambadiana
Voadika ny 16 Jona 2017 4:34 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, 日本語, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Jolay 2007 ity adika eto ity)
Ny vanintaona mafana no fotoana tsara indrindra hanambadiana. Tsy miavaka amin'izany ny mpifankatia Kyrgyzstani ka noho izany, mitatitra an-tsary sy an-tsoratra momba ny fampakarambadin'ny naman'izy ireo ny bilaogera.
Nahita i Azamat fa misy ny fironana vaovao teo amin'ireo lehilahy namany:
Nanamarika ny vanim-potoanan'ny fanambadiana teo amin'ireo lehilahy namako ny Asabotsy teo (efa manambady ny ankamaroan'ny vehivavy namana). Eo amin'ny faha-25 taonany ny maro amin'izy ireo. Nahita tampoka izy rehetra fa fotoana hanambadiana izao.
Na izany aza, nanohitra ny faneren'ny namany i Azamat:
I am not getting married anytime soon. 🙂
Mbola tsy hanambady mihitsy aho ao anatin”ny fotoana haingana.
Maro amin'ireo lanonam-panambadiana ao amin'ny firenena be tendrombohitra no mitovy amin'ny Tandrefana tanteraka, anisan'izany ny natrehin'i Tamara vao haingana:
Nanambady omaly ny namako, ary nahafinaritra ny mariazy. Tsy fantatro fa azo atao kay ny mikarakara lanonana tahaka izao ao anatin'ny toe-piainana Kyrgyz. Notontosaina tao amin'ny toeram-piala-tsasatra Kois Tash, akaikin'ny renirano ny mariazy. Nisy tokontany filalaovana tennis sy zohy fialofana maoderina tao.
Nanatontosa ny voadin'izy ireo teo amoron-drenirano ireo mpifankatia ary nahatonga ny fotoana ho tantaram-pitiavana kokoa ny feon-dokanga…
Ny toetr'andro ihany no tsy azo resena ao Kyrgyzstan, hoy i Tamara:
Nahafinaritra ny zava-drehetra……ankoatra ny…….orana sy ny hatsiaka
Ny daty nosafidian'ny ankamaroan'ireo mpanambady vao dia ny 7 Jolay 2007, heverina fa mitondra vintana sy hafaliana ho an'ny mpifankatia.
Notabene (iray amin'ireo bilaogy Kloop ) nilaza hoe:
Androany 07/07/07. Betsaka ireo mariazy. Nandrakitra mpanambady vao miisa 63 ny foibe ZAGS [foibe fandraketana mariazy], raha eo amin'ny 40 ny tarehimarika mahazatra rehefa Asabotsy.
Elena Skochilo (LJ user morrire) naka sary mahafinaritra maromaro tao amin'ny ZAGS mandritra ny andro iray, tahaka ity iray ity:
Hoy i Elena:
Tsy maintsy niandry telo andro ny sasany tamin'izy ireo, ary ny hafa tsy maintsy nandany ny alina tao amin'ny ZAGS mba hametrahana ny taratasy fangatahana hanao mariazy. Ny hafa kosa afaka nifanambady tsy nisy olana tamin'io andro io. Mitentina 200 soms ny voromailala roa, ary tena korontana sy vahoaka be dia be no tao amin'ny efitra fanambadiana. Nitafy akanjo ambony ambany maivana ny ankamaroan'ireo mpampakatra, ary ny ampakarina kosa niakanjo mena, izay tsy dia mahazatra.
Nisy ireo fanehoan-kevitra sasany momba ny ZAGS ihany. Ohatra:
le petit tank (tanky kely)
Toerana mahatsiravina hanaovana fanambadiana ny ZAGS ao aminay. Amin'ny endrika Sovietika ny rehetra, ary ao amin'ny fidirana, tsy mahita na inona na inona afa tsy toerana eo am-panamboarana sy mpivaro-tena ireo mpanambady vao mampalahelo!
Araka izany, toerana malaza hivorian'ireo mpivaro-tena ny ZAGS Bishkek?
Tao amin'ny Diesel forum, misy ihany koa ny resaka mariazy nitranga tamin'izany andro izany:
Nilaza i Ainura Chanybaeva, filohan'ny ZAGS fa mahafinaritra ny mahita fa nitombo tao anatin'ny roa taona ny isan'ny mariazy eo amin'ny foko samy hafa.
Ravva mamazivazy hoe:
Hitondra vintana ihany koa ve raha misara-panambadiana amin'izany andro izany?
Misaotra an'i Asel nanampy tamin'ny fandikanteny!